[Ukara] Wondershare WinSuite 2012: Windows optimizer
Nsogbu site iche iche PC nsogbu? Kwụsị Ịnọgide na-eche!
Ngwa ngwa kọmputa? Data ọnwụ? Nzuzo leaked ma ọ bụ paswọọdụ echefu? Anyị na-eche ihe mgbu gị. Ị na-adịghị ọ bụla mmezi oge ego na ịchọpụta gị umengwụ kọmputa nzọụkwụ site nzọụkwụ, ma ọ bụ ike na oké ọnụ ahịa furu efu ọdịnaya ọzọ site ọkọ. Ka Wondershare WinSuite 2012 idozi ya niile n'ihi na ị na nkeji! Na naanị otu click, ị nwere ike adị n'elu gị na kọmputa na-eme ka ọ na-agba ọsọ nsogbu-free. Ke adianade do, na-azụ gị mkpa furu efu data ịzọpụta oge, chebe gị onye faịlụ na ihichapu ọ bụla Chọpụta nke gị arụmọrụ na Windows ma ọ bụ online, weghachite echefu okwuntughe gụnyere Windows na Office ngwaahịa igodo. Ọzọkwa, mmepụta oyiri ma ọ bụ nkebi gị disk na mfe na conveniently. (N'ụzọ dị mwute, nke ugbu a version bụghị Ofụri Esịt dakọtara na Windows 8 na n'elu.)
Main Akụkụ nke a Windows mmezi ngwá ọrụ
PC Clean & Tuneup - 360 Celsius PC ike ego na 1 Pịa iṅomi ma ịchọpụta na kọmputa gị na-ebuli & adị n'elu PC arụmọrụ.
Data Recovery - Naghachi iche iche iche iche nke ehichapụ ma ọ bụ formatted data si dị iche iche diski, dị ka USB mbanye, mpụga ike mbanye, na ekwentị mkpanaaka, igwefoto dijitalụ, iPod, na ndị ọzọ na nchekwa media.
Paswọọdụ & Key Finder - Chọta gị Windows & Office ngwaahịa igodo mgbe ị kwesịrị reinstall ha, nakwa dị ka okwuntughe gị Gmail, Yahoo, Outlook, wdg mgbe ị na-echefu ha.
Disk Manager - A zuru ezu disk management ngwọta maka nkebi management, disk / nkebi cloning, disk / nkebi ehichapụkwa, na ndị ọzọ.
Nzuzo & Nche - kpuchido nzuzo gị ma hụ na data nche site na-eke onye ebe dị nchebe, erasing "nzọụkwụ" na Windows na online, shredding ma ọ bụ encrypting faịlụ.
Ego, Ebuli & adị n'elu Your PC
1-pịa PC Health Lelee: 360 Celsius Doppler diagnoses gị na PC na-enye nkọwa zuru ezu na aro na usoro ịrụ ọrụ njikarịcha dị ka results.
Windows Speedup: Ebuli Windows mmalite ihe, Windows ọrụ ihe na Internet ihe na-adị n'elu kọmputa.
Windows nzacha na mkpocha: Iṅomi ma hichaa ndekọ na-edebe ya mkpa na nchebe, doro anya junk faịlụ na-eme ka gị na kọmputa-agba ngwa ngwa, na-ewusi nche nke gị internet ọrụ akụkọ ihe mere eme, ihichapu kọmputa gị akara ukwu iji chebe nzuzo, iwepụ isi ike software na-ewepụ ejibeghi plug- ins na-eme ka ihe nchọgharị gị na ngwa ngwa.
Naghachi fọrọ nke nta niile Echefuola Files Painlessly
Iche iche iche iche nke Files: Ofụri Esịt naghachi akwụkwọ, Archives, Ozi ịntanetị, photos, vidiyo na ọdịyo faịlụ na preview tupu mgbake.
N'ozuzu Data Loss ọnọdụ: Naghachi data ehichapụ site Mgbanwe + ihichapụ ma ọ bụ sitụbeghị egweri biini, furu efu si emerụ ma ọ bụ formatted partitions.
Si dị iche iche Devices: weghachite data furu efu si esịtidem ike mbanye, USB mbanye, mpụga ike mbanye, na ekwentị mkpanaaka, igwefoto dijitalụ, iPod, MP3 / MP4 ọkpụkpọ, na ndị ọzọ na nchekwa media.
Chọta Okwuntughe & eme
Paswọọdụ Finder: Chọpụta fọrọ nke nta niile zoro ezo okwuntughe gị Windows Live, MSN, Hotmail, Outlook, Gmail, Yahoo, Windows akpaaka logon, ntụgharị AutoComplete, ọsịsọ-elu na ndị ọzọ.
Windows Key Finder: Chọta gị Windows ngwaahịa ID na isi maka mfe reinstall.
Office Key Finder: Chọta Office isi azụ maka Office 2000, XP, 2003, 2007 na 2010.
Jikwaa Draịvụ & diski Ọma
Mmepụta oyiri Disk / nkebi: mmepụta oyiri partitions ma ọ bụ dum disk gụnyere Windows, omume, faịlụ na onye ntọala ọzọ nkebi ma ọ bụ disk.
Disk nkebi: Hazie gị nkebi ma ọ bụ disk n'ụzọ dị irè site resizing, ihichapụ, formatting, na-ezo, na-ekewa ma ọ bụ merging.
Ndabere & Weghachi: Easily ndabere gị faịlụ, nchekwa, nkebi ma ọ bụ disk 1-pịa weghachi mgbe ha na-aba ma ọ bụ mebiri emebi.
Chebe Nzuzo & Dị Oké Mkpa Data na High Nche
Personal Nchekwa: Mepụta a "onye mma" na disk ihe onwe onye stof na na ị na-ekwe ka ohere.
Nzuzo Cleaner: na ntukwasi-obi ihichapụ online Internet egwu na usoro ọrụ ndia echekwara na nchọgharị gị, na-adịbeghị anya akwụkwọ na ndia na draịvụ ike, na-amalite menu, wdg
Njikwa izo ya ezo & Shredder: encrypt gị onye data kwụsị n'enweghị ikike ohere, ma ọ bụ na-adịgide adịgide shred faịlụ mmekwata ọbụna na mgbake software.
Niile na ngwaahịa ndị downloadable. The ịnara CD ga-ahapụ anyị mbupu center na California na-esote ụbọchị azụmahịa.
Multi-ọtọ na zuru okirikiri ọrụ idozi fọrọ nke nta gị niile PC nsogbu. Na-atụ anya dị ike ọrụ na a pụrụ ịdabere na ya pụta.
N'ihe ize ndụ Free
Ụlọ ahịa n'enweghị na anyị ala online ụlọ ahịa. Gị data na ozi gbasara onwe na-echebe site SSL technology.
90-Day Nkwa na
Ọ bụrụ na n'ihi ihe ọ bụla ị na-agaghị afọ na gị zụọ, kpọtụrụ anyị na anyị ga-nkwụghachi 100% gị zụọ.
Otu afọ FREE oru nkwado. Anyị ga-aza ajụjụ n'ime 1 ~ 2 awa, dị na awa 24 n'ụbọchị, 7 ụbọchị n'izu.